Umehluko phakathi kwezinto ezintsha nezigaywe kabusha zepulasitiki
Uma uyimikhiqizo yepulasitiki ethengiswayo, abanye abathengisi bangakunikeza inani elikhangayo kuyilapho inani elimaphakathi emakethe liphezulu kakhulu. Lokho kungenxa yokuthi basebenzisa izinto ezigaywe kabusha. Ngalokhu, sithanda ukwethula kafushane umehluko phakathi kwezinto ezintsha zepulasitiki...
Umsebenzi oyingxenye, Ukuzijabulisa okuncane
Ukwabiwa kwesikhathi esifanele kungasiza abasebenzi ukuthi basebenzise ingxenye yomsebenzi kanye nesikhathi sokuphumula ngendlela enengqondo. U-Leto akazibophezele kuphela ekuqeqesheni amakhono ebhizinisi amalungu eqembu, kodwa futhi uvame ukuhlela imisebenzi yangaphandle. Ngemva kobusika obubandayo, intwasahlobo ibuyile. Ukukhokhela...
Ikhasimende Okokuqala, Dala I-Enterprise Value
Ngo-2007, abantu abambalwa, abagcwele umdlandla nokudala, babenengxenye yegumbi e-Yiwu International Trade City, babelana ngendawo nesinye isitolo. Base beqala ibhizinisi, baqoqa amathalenta futhi basebenza ndawonye. Baqala ibhizinisi nge-hardware ...
Lapho ukhetha usinki, yimiphi imininingwane okufanele inakwe?
Lapho uthenga usinki, yini oyikhathalelayo? Impahla, isitayela, usayizi. Ngokuvamile wonke umuntu ngokuyisisekelo ukhathalela kuphela la maphuzu. Kepha asekhona amanye amaphuzu abalulekile anganakwa yiwo wonke umuntu, adala izinkinga eziningi ...